Lammaa Magarsaa: ''Kun mallattoo nageenyaa miti. Waligaltee keenya keessa hin jiru'' - BBC News Afaan Oromoo
Beekkamtii dhaaba Adda Bilisummaa Oromoon alatti gareen hundaa'e badiifi saamicha geessisaa jira.
Kana kan jedhan Pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaadha.
''Beekkamtii dhaaba kanaan alatti saamicha, rakkoo adda addaa uumuu kan baran rakkoo adda addaa geessisaa akka jiran ilaalaa jirra,'' jedhaniiru.
''Kanas hoggansa ABO waliin yeroo mari'anne tokko tokko beekkamtii isaaniin ala yakka akkasiifi badii akka raawwatan isaaniis nu himanii jiru.''
Ibsa har'a waligaltee dhaabicha waliin Asmaraatti raawwate yeroo ibsanitti wanta raawwataa jiru seeratti ni deebisa jedhan.
Obbo Lammaan akka jedhanitti gareen uffata waraanaa uffatee magaalaa keessa ummata walitti qabe barsiisna jedhu mul'ataa jira jechuun dubbataniiru.
''Inumaa maqaa waligaltee kanaatin kan meeshaa bituutu jira.''
''Kuni mallattoo nageenyaa miti. Waligaltee keenya keessa hin jiru, ''kan jedhan Obbo Lammaan seeratti deebisuun dirqama mootummaati jedhaniiru. Ummannis kana baree deeggarsa nuuf taasisuu qaba jedhaniiru.
Jiraataan magaala shaambuu tokko yaada BBC'F kennenii, loltootni ABO nannoosaanii akka jiranii fi yeroo barbaachisutti uummata waliin karaa nagaa taheen wal argaa jiruu jedhan.
Akka yaada jiraataa kanaatti Maqaa ABOtiin aanaa Horroo naannoo akkayyu jedhamutti, namoonni jiraattotarraa meeshaa fudhatan loltootuma kanneenii to'atamaniiru jedha.
Hayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa loltootni keenya duraaniyyuu hawaasa keessa buufachuun hojjechaa turan waan haaraa mitii jedhan.
Gaafii loltonni kunnen haala ammaa mul'ataa jiru kanaan hawaasa keessatti wagggota dura mul'ataa hin turre. Kanaafuu qaamni alaa dabalame jiraa imoo ykn bu'aa walii galteeti yaada jedhuuf deebii yoo kanannis, lakkii alaa hingallee. Kan mul'ataa jiran isaanuma duraan hawaasa keessa turaniidha jedhaniiru obbo Dawud.
Loltuun kunneen sochii yeroo taasisan loltoota mootummaa waliin yoo walitti dhufan waraana banuu danda'uu yaada jedhuuf obbo Daawud karaa keenyaan hajajni hinjiruu. Nuufi motummaa jidduutti waraanis dhaabateera jedhaniiru. Kanaafuu yoo alaalatti argan illeen irraa maqanii deemu malee
Kana malees, qaamni maqaa ABO'n saamichas tahe yakka biraa hojjetu yoo jiraate, qaama mootummaa waliin toora odeeffanno ittiin wal jijjiru bannee waan qabnuuf nuuf qoodanii mirkaneeffannas jedhan obbo Daawud.
Walumaagalattis siviliifi qabeenyaa sivilii irratti miidhaan qaqabsiifamu dhorkaadha.
Waliigaltee nageenyaa Asmaraatti gaggeefameen booda Jilli ABO gara biyyatti ergames haala sochii siyaasaa nagaan biyya keessatti gaggefamuu fi hoggansi ala jiru biyyatti deebi'u irratti Finfinnee galee hojii jalqabee jira.
Dantaa alaa ABO: Sagantaa siyaasaa kan jijjirre hin qabnu
Sirna mudama Joo Baayiden fi Kamaalaa Hariis irratti maaltu eegamaa?
Daqiiqaa 17 dura
Daqiiqaa 25 dura
Jaakkeettii Meelaaniyaa fi suuraalee pireezidantummaa Tiraamp ibsan saglan
Somaaliyaan loltoonni ishee lola Tigraay irratti hirmaachuu haalte
Tigraayitti namoota miiliyoona 1.8'f gargaarsa gochuu mootummaan hime
Lestar Siitiin har'a injifannaan Piriimer Liigii dursuu eegala
Abbaay Tsahaayyeefi Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF afur ajjeefaman